Haala Siyaasaa Itoophiyaa Keessaa kan Yeroo ammaa Irratti Ibsa Waloo Paartii Adda Bilisummaa Affaari fi Adda Bilisummaa Oromoo
Gochaan TPLF/EPRDF kan jidduu kanaa hawaasa naannicha jiraatuun mirkanaahe kun, fakkaatiidhuma diraamaa sirnichi guutummaa biyyattii keessatti sabooaa fi sab-lammiilee walitti buusuuf hojjetaa turee tahuu hubachuun nama hin dhibu. Sirni Itoophiyaa ummatootaa Itoophiyaa keessaa gargar qoqqoodee irree gamtaatin qabs isaan bilisummaa, nagaa fi dimokraasiif taasisanirraa laaffisuuf waan isaa dandahame hunda gochaa ture. Akeeka isaa farra-ummatootaa tahe kana milkeessuufis qoqqoodee bituuf tooftaa hundatti dhimmi bahaa jira.
Waan taheef, Paartiin Adda Bilisummaa Affaari fi Addi Bilisummaa Oromoo ummatootni Affaar, Oromoo fi ummatootni Itoophiyaa keessaa biroonis karoora sheexanummaa sirna TPLF/EPRDF kana dursanii akka hubatan dhaamsa dabarsu. Sirni umriin isaa dhumatee 2 qarqara bool’aa jiru kun waan abdii kutateef, aangoorra bubbuluuf jecha yakkoota bifa hundaa raawwachuurraa of booda hin deebi’u.
Kanaaf, hawaasni addunyaa mirni TPLF/EPRDF, walitti bu’iinsota dhuma hin qabne bakkayyuutti dhalchuu mannaa ol’aantummaa fi abbaa biyyummaa ummataa mirkaneessuuf furmaata hunda hammate akka barbaadu dhiibbaa akka irratti taasisan gaafanna.
Maayiirratti, ummatni Affaar, Ummatni Oromoo fi Ummatootni Itoophiyaa keessa biroon marti dammaqiinsaan of tiksuu fi walis tiksuudhaan walitti bu’iinsa sirni TPLF/EPRDF isaan jidduutti dhalchu kamuu karaa nagaatin akka furatan dhaamsa keenya dabarsina. Kanuma waliin dhaabbileen siyaasaa hundumtuu ummatootni sochiilee fi gochaalee farrummaa murna TPLF kan hariiroo ummatootaa booressan ummata hubachiisuu irratti qooda guddaa akka taphatanii fi gamtaan qabsaawudhaan sirna nama-nyaataa kana aangoorraa qaarisuuf akka sossohan waamicha keenya dhiyeessina.
Paartii Adda Bilisummaa Affaar Adda Bilisummaa Oromoo